सावधान! शनि र मंगल ग्रहको बन्यो यस्तो अशुभ योग, यी ४ राशिलाई आइलाग्ने छ यस्ता समस्या ! – ViralNews
By admin On July 13, 2018 In Uncategorised Leaveacomment
ज्योतिष शास्त्र अनुसार विभिन्न ग्रहले आफ्नो ठाउँ परिवर्तन गरिरहेकै हुन्छन्। जसका कारण हरेक व्यक्तिको कुण्डलीमा पनि परिवर्तन आउने गर्छ। कुनै ग्रह परिवर्तनले निश्चित राशिलाई राम्रो फल मिल्ने हुँदा भने कुनैलाई अशुभ फल मिल्ने हुन्छ। अब छिट्टै हुन लागेको शनि र मंगल ग्रहको असर भए खासै राम्रो बन्ने गर्दैन। मंगल ग्रहलाई अग्नि ग्रह मानिने गरिन्छ भने शनि गृहलाई एक क्रुर ग्रह समेत मानिने गरिन्छ। यी दुई ग्रहको मिलन हुँदा कहिले पनि राम्रो संयोग बन्ने गर्दैन। यस कारण पनि अबको समय विभिन्न राशिलाई आत्यधिक नोक्सानको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। शनि र मंगलको मिलन हुँदा आगोमा तेल हालेको जस्तो हुने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिने गरिन्छ। शनि र मंगल ग्रहको मिल्नबाट निम्न लिखित राशीहरुलाई अशुभ रहने छ।
शनि अहिले धनु राशिमा रहेको छ भने मंगल ग्रहले पनि राशी परिवर्तन गरेर धनु राशिमा प्रवेश भएसँगै आमनेसामने भएका हुन्। यस क्रममा वृष राशी हुनेहरुले हरेक आर्थिक कार्य गर्नु भन्दा पहिला राम्रोसँग सोच्नु पर्ने हुन्छ। साथै यस राशी हुनेहरुले सवारी साधन प्रयोग गर्दा संयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। दुर्घटनाको सम्भावना देखिन्छ। क्रोधमा वृद्धि हुन सक्ला।
यस राशिका व्यक्तिहरुको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको धेरै ख्याल गर्नु पर्ने समय आउनेवाला छ। गम्भीर बिमारीले सताउन सक्ने हुँदा सजक रहनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो आर्थिक कार्यमा केहि हदसम्मको लापरवाही भएमा मात्रै पनि व्यवसाय डुब्न सक्ने हुन्छ। साथै बिना कारण झैँ-झगडा हुनाले पनि तपाईको साझेदारीमा अड्चन देखा पर्न सक्ला।
यस राशी हुनेहरुको वैवाहरिक जीवनमा ठुलै समस्या देखा पर्न सक्ला भने प्रेम सम्बन्ध पनि टुट्न सक्ने ठुलै सम्भावना भन्ने देखिन्छ। महत्वपुर्ण निर्णय लिने समयमा लापरवाही हुँदा तपाई ठुलै समस्याको भागिदारी हुन सक्नु हुन्छ। साथै क्रोध समेत अत्याधिक वृद्धि हुन सक्ला। यस राशी हुने व्यक्तिको जोर्नी सम्बन्धि समस्या बढेर जान सक्ला।
सबै भन्दा असर खेप्नु पर्ने हुँदा यस राशी भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रकारका समस्याको एस्सामना गर्नु पर्न सक्ला। आर्थिक कार्य डामाडोल हुनाले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ला भने यस राशी हुने व्यक्तिको दुर्घटना समेत हुन सक्ने हुँदा सजक रहनु पर्ने हुन्छ। यस राशिका व्यक्तिमा धैर्यताको कमीका कारम बन्न लागेको कार्य समेत असफल हुन सक्ला। आत्मविश्वासको समेत कमि रहन सक्ने हुँदा धैर्यता राख्नु होला।